1.Apple waa miraha macaan, ee la cuni karo ee geedka Malus domestica. Waa miro wareegsan oo ku imaan kara cabirro iyo midabbo kala duwan sida jaalle, cagaar ama casaan. Tufaaxu badanaa waa macaan yihiin oo cam waxaa loo cunaa mid cusub ama loo isticmaalaa cuntooyinka, suugada, faafida, casiirka ama baastada caanka ah. Abuurka tufaaxa sidoo kale waa la jajabin karaa si loo soo saaro saliida, oo loo isticmaalo warshadaha qurxinta. Midhaha waxaa ku jira inta badan karbohaydraytyada, sonkorta iyo faybarka oo leh heerar dayacan oo borotiin iyo dufan ah Qeexitaanka alaabta ...
Qiimaha nafaqada ee tufaaxa 1, tufaax waa nooc ka mid ah cuntada kalooriyada yar, 100ki garaam kasta waxay soo saaraan tiro 60 kcal ah oo kuleyl ah. Nafaqooyinka tufaaxa ah ee ku milmaya, way fududahay in jirka bini'aadamku nuugo, loona yaqaan "biyaha nool". waxay ka caawisaa inay milmaan baaruudda oo ay ka dhigto maqaar jilicsan oo jilicsan. 2, tufaaxu wuxuu leeyahay "miro xigmad ah", "xusuusta miraha" magac amaan leh. Cunista tufaax badan ayaa muddo dheer caan ku ahaa inay hagaajiso xusuusta iyo caqliga. Tufaaxu waxay hodan ku yihiin sonkorta, fiitamiinnada, macdanta iyo ...
Qiimaha tartan Shiineeska Jumlada casaanka cusub ee iibka ah ee iibka ah
1, Basashu waxay leedahay saamaynta faafitaanka qabowga dabaysha, maxaa yeelay nalalka iyo caleemaha Basasha waxaa ku jira nooc saliid ah oo kacsan oo la yiraahdo propylene sulfide, waxay leedahay dhadhan basbaas leh, maaddadani way iska caabin kartaa hargabka, waxay iska caabin kartaa fayraska hargabka, waxay leedahay saameyn xoog leh oo bakteeriya ah. Basasha waxay hodan ku tahay nafaqada waxayna leedahay ur ur urka Waxay kicin kartaa dheecaanka caloosha, xiidmaha iyo qanjirka dheefshiidka, kordhinta rabitaanka cuntada iyo kobcinta dheefshiidka. Ka sokow, basasha kuma jirto dufanka. Saliideeda muhiimka ah waxay ka kooban tahay isku dar ...